Public Search Result
Book Borrowing Rankings
Popular Book Ranking List
Reader Borrowing Rankings
History Recommended List
Language EN မြန်မာ
Language: EN မြန်မာ
Prefix Match Fuzzy Search Accurate Search
Any Word Title MainTitle ISBN/ISSN Author Subject Class No. Keywords Order No. Publisher Published Year Call No.
Search Term: ရုပ်ရှင်နှင့်ကျွန်တော် , 40,632 results have been searched, Search time: 0.137 seconds , Sorting Option: Match level Published Date Subject Title Author Call No. Borrowed Times Renewal Times Volume No. Sort by: Desc Asc Hide Navigation | Hide trend diagram
Confirm to search?:
စာပေဝန်းကျင်နှင့်ကျွန်တော် ဧကရီပန်းသည်မနှင့်ကျွန်တော် ရုပ်ရှင်နှင့်ကဗျာ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ကျွန်တော် သတင်းဂျာနယ်နှင့်ကျွန်တော် သူတို့နှင့်ကျွန်တော် ရုပ်ရှင်နှင့်တေး ပန်းနှစ်ပွင့်နှင့်ကျွန်တော် စာပေဝန်းကျင်နှင့်ကျွန်တော် ဆရာသော်တာဆွေနှင့်ကျွန်တော်
NL Yangon (26633)
မင်းဇော်၊ ကာတွန်း (269)
မျိုးမာန်၊ ပန်းချီ (211)
သုခ၊ ကို (194)
လှကြွယ်၊ ဦး (175)
အောင်ကြောင်းဖြာ၊ ပန်းချီ (136)
ကျော်ကျော်စိုး၊ ဦး (အင်္ဂလိပ်စာနည်းပြ) (104)
Palm-leaf Manuscript (1)
Save to booklist: Create New Booklist
Total 4,064 pages First Page <Prev 1234567 8910 Next > Last Page>>
Author: မြေဇာ၊ ကာတွန်း
Publisher: စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ Published Date: ၂၀၁၉
Literature Type: Books , Call No.: 741.5 မြေ ၂၀၁၉/၁၆၀၉
In Library Info.
Book Info. Overview
Publisher: စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ Published Date: 2019
Literature Type: Books , Call No.:
Publisher: ရဲအောင်စာပေတိုက် Published Date: 2003
Literature Type: Books , Call No.: 959.1 ညို ၂၀၀၃/၈၀၇
Author: စိန်၊ ဦး၊ ဗန္ဓုလ-
Publisher: သိရီဇေယျုံပုံနှိပ်တိုက် Published Date: 1946
Literature Type: Books , Call No.: ၀၉၀ စိန် ရှား/၂၆၆၀
ရှေးရှေးတုန်းက ကံ့ကော်ပွင့်တွေ Ordering
Publisher: ကံ့ကော်ဝတ်ရည်စာပေ Published Date: 2015
Literature Type: Books , Call No.: ၈၉၅.၈၃ စံ ၂၀၁၅/၂၂၄၀
Author: လှိုင်ဘွား၊ စီစဉ်သူ
Publisher: သင်းစာပေ Published Date: 2010
Literature Type: Books , Call No.: ၃၂၄ ရဲ ၂၀၁၀/၃၈၇၂
Publisher: စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ Published Date: 2017
Literature Type: Books , Call No.: ၉၂၈/ အောင် ၂၀၁၇/၁၉၂၀
Publisher: လင်းသစ်ရောင်စဉ် Published Date: 2016
Literature Type: Books , Call No.: ၈၉၅.၈၄ ရွှေ ၂၀၁၆/၂၃၀
Publisher: သင်းစာပေ Published Date: 2011
Literature Type: Books , Call No.: ၃၂၀.၉၅၉၁ အောင် ၂၀၁၀/၃၈၆၉